♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: ♫♥✿* အာဇာနည်မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ♫♥✿*
သူ့ ကျွန်ဘ၀က လွတ်ဖို့ ရရာလက်နက်စွဲပြီး အသက်ကိုစွန့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရှေးအဆက်ဆက်က အဘိုးတွေ အဘွားတွေကိုရော သတိရပါသလား.ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည် တွေဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဖခင် ...အစ်ကို..ခင်ပွန်း ...ချစ်သူ တစ်ယောက်ယောက်များဖြစ်နေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး ၀င်မိပါသလား..တစ်ကယ်လို့ သင်ကိုယ်တိုင် သူတို အပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး
ပုတ်သွားတာ နာမည်တစ်လုံးတော့ မပုတ်သွားဘူး...အခုကျွန်မတို့ တွေ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်မှာရော..ကျွန်မတို့ ရဲ့ နောင်လာမယ့်
ပြီးရင် လက်တွေ့ လေး လုပ်ကြည့်ပေါ့.....
ကျွန်မ စိတ်ထဲက ခံယူချက်နဲ့အတွေးအမြင်လေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်...လက်ခံတယ် လက်မခံဘူးဆိုတာက စာဖတ်သူတွေသဘောပါ
လူချင်းတူပေမယ် စိတ်ချင်းမတူဘူးလေ...ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာက...အခုခေတ်လူငယ်တွေ ဘ၀တန်ဖိုး ဘာသာတန်ဖိုး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုး
သိစေချင်တယ်..ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ ရလာခဲ့တာ မဟုတ်လို့ ပါ....
အာဇာနည် ဘိုးဘိုးတွေလို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်ဖို့ မလိုဘူး...အသိပေးပြီး ကာကွယ်ရင်ပဲ..လုံလောက်ပြီး...ဒါဆိုရင် အသက်ပေးသွားတဲ့
အသိပေးပြီး ကာကွယ်ရမှာက သိပ်မခက်ပါဘူး...အကြမ်းဖျင်းတော့..
(၁) ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကို တခြားနိုင်ငံတွေက အထင်သေးစရာဖြစ်အောင်မနေဖို့ ...
ဆိုလိုတာက..အခုဆိုရင်...တစ်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်နိုင်ငံ..ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခွင့် စီးပွါးရေး လုပ်ခွင့် လည်ပတ်သွားလာခွင့်တွေ ရှိခဲ့ပြီမို့ကိုယ့်နိုင်ငံက
ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောကြရင် တရားခံ နှစ်ယောက်ကို နာမည်တပ်ပြီးမပြောပါဘူး...မြန်မာနိုင်ငံ နာမည်တပ်ပြီးပြောမှာနော်...ဘယ်သူ သိက္ခာကျလဲ..
ဂျပိုးနိုင်ငံ ဖြစ်ဖို့ လားဟင်..သူတို့ တွေအသက်သွေးချွေးရင်းပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တာ ဒီလိုအပြောခံရမယ်ဆိုရင် တော်တော်ဝမ်းနည်းနေလိမ့်မယ်...နောက်တစ်ချက်က
ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် သတိထားရမှာက ကိုယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ...ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ သူဌေး
ငံမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတာလဲ သူတို့ မသိဘူး..သူတို့ သိတာ မြန်မာပြည်က လာရင် မြန်မာပဲ...ဒါ့ကြောင့် အလုပ်အပေါ်မှာ ရိုးသားကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်....ဒါဆိုရင်
သင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အသိပေးပြီး ကာကွယ်ရာ ရောက်ပြီ...
ဆိုလိုတာက...ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုး ပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံ နေကြတဲ့အတွက်..ဓလေ့ထုံးစံ တော့ မတူကြပါဘူး..လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်လူမျိုး
ကိုချစ်ကြတာချည်းပဲ....ကိုယ့်လူမျိူးကို ချစ်တတ်ကြပေမယ့် မကာကွယ်တတ်ကြဘူး..မြေမြိုလို့လူမျိုးမပျက်..လူမျိုမှလူမျိုးပျက်တယ် စကားကကျွန်မ အမြင်လေးပါ..
ပါပဲ....ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အားနည်းချက်ကို အရင်မပြင်ပေးပဲ...ဘာသာခြားဆိုင်မှာ မ၀ယ်ဖို့ဘာသာခြားကို လက်မထပ်ဖို့မွတ်စလင်
လူမျိုးကို ယူတာ မ၇ှိပါဘူး...၅ နှစ်နေမှ တစ်ယောက်ပဲ ကြားဖူးပါတယ်...အဲ..လူမျိုးအချင်းချင်းပဲ..ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ယူကြပါတယ်.ပြီးတော့ ဖြတ်လမ်းနည်း
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အရက်သမား..ဖဲသမား လောင်းကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတာ တအားများတာပဲ...အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဘ၀တန်ဖိုးမသိလို့ အမျိုးကိုမချစ်လို့ ပါ..ကျွန်မတို့ 
မြို့ မှာ အရက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့သူတွေဟာ တရုတ်တွေ မွတ်စလင်တွေ ဟိန္ဒူတွေမဟုတ်ပါဘူး...မွန်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ..ဘုရားတားမြစ်ထားတဲ့ အလုပ် ငါးမျိုးထဲမှာ
သေရည်သေရက်ရောင်းတာရယ်..လူရောင်းတာရယ် ပါတယ်...အခုခေတ်မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ မလေး ထိုင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရောင်းစားခံရတာတွေ ပြည့်တန်ဆာ
ကိုယ့်လူမျိုးကြီးပဲ..စဉ်းစားရင် သိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်...ကိုယ့်လူမျိုးကို သူများမျိုလို့ မပျက်ပါဘူး..ကိုယု့်အချင်းချင်း ပြန်ဖျက်မှပျက်တာပါ...အရက်ဆိုင်လေး မာဆက်လေး ကေတီဗီ နိုင်ကလပ်လေးမထောင်ခင် သေချာစဉ်းစားပါ..ငါ့အလုပ်ဟာ ငါတို့ လူမျိုး ကို ငါကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်နေတာပါလားလို့ သိစေချင်တယ်.
ကိုယ့်လူမျိုး ပျက်စီးမှ ကိုယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ..အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ ချမ်းသာခြင်းပါ...နောက်တစ်ခု က ဘာသာခြားကို ယူတဲ့
**ဒီခေတ်မိန်းကလေးတွေက အရမ်းအညှာလွယ်တယါ. အပျိုစစ်တယ်ဆိုတာ ရှားတယ်**တဲ့...နောက်တစ်ယောက်က ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတော့.***.ရှိပါတယ်ကွ..ပထမနှစ် ဖရက်၇ှာလေးတွေကွ..မင်းသာ..
ကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့ မော်မြိုင်တက္ကသိုလ် ကြီးဟာ အခုချိန်မှာ အပျက်တွေနဲ့ ဝိုင်းရံထားပါတယ်...ကျောင်းနားတစ်ဝိုက်မှာ တိတ်တိတ်ပုန်း မာဆက်တောင် ရှိတယ်တဲ့..ပြည့်တန်ဆာ
တွေလည်း ပေါတယ်တဲ့...အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ စီးပွါးရှာတဲ့သူတွေဟာ မွတ်စလင်တွေ တရုတ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်..ကိုယ့်အချင်းချင်း တွေပဲ...နောက်တစ်ချက်က
၀တ်ရ၀တ်ရ ချွတ်ရချွတ်ရ..လုပ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ...Sex ဆိုတာ ကိလေသာအလုပ်မို့Sexyကျတာလည်း ကိလေသာကို အားပေးတာပဲ...အဲ့လိုဖော်တာ
ဘ၀ကတည်းက သူ့ ရဲ့ စရိုက် စိတ်ဓါတ်က သူများနဲ့ မတူဘူး..ဘ၀အသိ၇ှိတယ်...ကိုယ်ကျင့်တရားရှိတယ်..မျိုးချစ်စိတ်၇ှိတယ်..ဒါတွေကို လူငယ်တိုင်း အတူယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့မိသားစု ရပ်ရွာ နဲ့ 
လူတိုင်းက ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ တိုင်းကို ယုံကြည်ကြပါတယ်..ဒါပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာကို သူများယုံကြည်လာအောင် မနေတတ်ကြဘူး...ကိုယ်လေးစားတဲ့ ဘာသာ
နဲ့ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အပြင် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ဂုဏ်ညှိးစေပါတယ်...ဥပမာ ဗုဒ္ဓက ဆဲဆိုတာကို တားမြစ်တာကို ကိုယ်က ဘာသာခြားကို သွားဆဲ
လူမျိုး သိက္ခာကျပါတယ်..ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဘာသာခြားတွေ လူကြားထဲမှာ ဆဲဆိုတာ ခံရတယ်...ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တုံ့ ပြန်ခဲ့လဲ..ဒါကို ကျွန်မတို့ စံအဖြစ်ထားပြီး
တအား၇ှက်ဖို့ ကောင်းတယ်...ဂါရ၀တရားဆိုတာ နေရာဒေသ
တဲ့ အသိလေး၇ှိကြတယ်..လူတွေက စားပြီးသားကို သိမ်းဖို့ မသိတာ...အံ့တော့အံ့သြမိတယ်..ဘာသာရေးအဆုံးအမအားနည်းလို့ မိဘတွေက မဆုံးမလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
ဘယ်နိုင်ငံက ဘ်ာလိုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ စိတ်ဓါတ် ခံယူချက်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်.
အသိလေးနဲ့ ကာကွယ်ယုံပါ....အသက်ပေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး...အဘိုးအဘွားတွေ အသက်သွေးနဲ့ ခင်းထားတဲ့ လမ်း အသိလေးနဲ့ လျှောက်ပေးယုံပါပဲ..
ကဲအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အလေးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသိလေးနဲ့ လျှောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်...ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ချစ်တဲ့
စိတ်လေး လူတိုင်းရင်မှာ၇ှိနေလို့ ပါ..တစ်ကယ်နည်းမှန်းလမ်းမှန်မချစ်တတ်သေးလို့ သာ မသိတာပါ..ဟုတ်တယ်ဟုတ်...
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 2:13 AM
အရမ်းကို ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဘလော့ လေးပါ